Edere ya Septemba 30, 2020 Septemba 30, 2020
Edere ya Maggio 27, 2020 Maggio 28, 2020
Mkparita uka m na Chukwu - ebook
Nkwupụta nke ụbọchị: otu Chineke si eme ka anyị nwere onwe anyị pụọ na ihe ọjọọ
Omume nke indulgences: obere ntinye iji nweta amara
Pope Francis họpụtara onye physicist mbụ na ụlọ akwụkwọ potifical
Edere ya Septemba 30, 2020
Na-atụgharị uche taa na njikere ị dị iso Jizọs
Edere ya Septemba 29, 2020 Septemba 29, 2020
St John Paul II gbasaara St. Michael Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi ahụ ka ọ kpuchido ndụ site n'afọ
Ihe edepụtaraOGBUGBU EGO
Gịnị bụ Hanukkah maka ndị Juu?
adlọ	Edere ya Ọktoba 1, 2019 Eprel 13, 2020
Hanukkah (talvolta traslitterata Chanukah) è una festa ebraica celebrata per otto giorni e otto notti. Inizia il 25 del mese ebraico di Kislev, che coincide con la fine di novembre-fine dicembre del calendario secolare. In ebraico, la parola “hanukkah” significa…
Okpukpe Worldwa: Gịnị bụ ilu?
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 1, 2019 Septemba 30, 2019
Ilu (akpọ PAIR uh bul) bu ntụnyere n’etiti ihe abụọ, emekarị…
Okpukpe Worldwa: Paradaịs na Koran
N'ime ndụ anyị niile, ndị Alakụba na-agba mbọ ikwere na ijere Allah ozi, ...
Okpukpe Worldwa: Nwoke ma ọ bụ Mesaya ọrụ Jizọs na okpukpe ndị Juu
N’igbu ya nkenke, echiche ndị Juu banyere Jizọs onye Nazaret bụ na ọ bụ onye nkịtị…
Rahula: nwa Buddha
adlọ	Edere ya Septemba 30, 2019 Eprel 13, 2020
Rahula bụ nwa nwanyị Buddha mere eme. Amụrụ ya obere oge tupu…
Okwukwe na obi abụọ na ọdịnala Buddhist
A na - ejikarị okwu ahụ bụ "okwukwe" mee ihe maka okpukpe; ndi mmadu na-asi "Gini bu okwukwe gi?" ịsị "Gịnị bụ okpukperechi gị?" N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ihe ama ama ịkọwapụta onye otu okpukpe dị ka "onye nwere okwukwe" Mana…
Ọrụ nke ịbụ abụ na Buddha
You gaa n’ụlọ nsọ Buddhist, inwere ike izute ndị na-agụ abụ. Schoolslọ akwụkwọ niile dị na…
Okpukpe Worldwa: lovehụnanya Chineke na-agbanwe ihe niile
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 30, 2019 Septemba 29, 2019
Ọtụtụ nde mmadụ kwenyere na ị ga-emeli ya. Ha chọrọ iji belata ọchụchọ ...
Okpukpe Worldwa: Ihe Buddha na-akụzi banyere mmekọahụ
Ọtụtụ okpukpe nwere iwu siri ike ma doo anya maka omume mmekọahụ. Ndị Buddha ...
Gịnị kpatara Ndị Kraịst ji efe ofufe na Sọnde?
adlọ	Edere ya Septemba 30, 2019
Ọtụtụ ndị Kraịst na ndị na-abụghị Ndị Kraịst nọ na-eche ihe kpatara na mgbe e kpebiri na…
Olee asụsụ mbụ e ji dee Baịbụl?
Akwụkwọ Nsọ malitere n'asụsụ oge ochie wee jie n'asụsụ dị mfe nghọta karịa Bekee. Akụkọ banyere asụsụ nke Akwụkwọ Nsọ gụnyere asụsụ atọ: Hibru, koine ma ọ bụ Greek na Aramaic. N'ime narị afọ…
Otu esi eme nyocha nke akọ na uche
Ka anyi che ya iru: otutu n’ime anyi ndi Katoliki anaghi aga eme nkwupụta oge obula…
Mmehie mmehie nke iteghete
ọ bụ ofka nke Setan, nke malitere na 1966 na San Francisco, bụ okpukpe na-eso ...
Gịnị bụ theosophy? Nkọwa, mmalite na nkwenye
Theosophy bụ ngagharị ọgụgụ isi nke nwere mgbọrọgwụ oge ochie, mana a na-ejikarị okwu ahụ ...
Ojiji nke hexgram na okpukperechi
Hexputara bu usoro geometric di mfe nke putara ihe di iche iche na otutu…
Rose na-atụgharị uche
adlọ	Edere ya Septemba 29, 2019 Eprel 13, 2020
Ntụgharị uche quartz a eduzi, nke e mere iji nyere aka gwọọ ọnya obi, dị mma maka nzukọ otu. Onye ndu nke gha eme dika ntuzi aka nke ntugharia gha agha agu akwukwo italicized…
Etu esi akwadebe maka onu ogugu
Yabụ ị nwetala Tarot gị, ị chọpụtala etu ị ga-esi chebe ya pụọ ​​na ntụpụ ya ugbu a…
Mụta iji pendulum mee ihe maka ịgba afa
Pendulum bụ otu n'ime ụzọ dị mfe na ịgba afa. B……
The Darshanas: mmeghe nke amamihe Hindu
Darshanas bu ulo akwukwo nke ihe omuma dabere na Vedas. Ha bụ akụkụ nke akụkụ Akwụkwọ Nsọ isii ...
Ntụziaka kwa ụbọchị maka omume Hindu kwa izu
Na okpukpe Hindu, a na-arara ụbọchị ọ bụla n'izu nye otu chi ma ọ bụ karịa nke okwukwe. Rituals ...
Ọrụ ebube nke mmiri ara nke Ganesha
Ihe pụrụ iche banyere ihe a na-enwetụbeghị ụdị anya nke mere na Septemba 21, 1995 bụ na ọbụna ndị na-ekweghị ekwe na-achọkarị onwe ha megide ndị kwere ekwe na ọbụnadị ndị na-anụ ọkụ n'obi bụ ndị guzo n'ahịrị ndị dị na mpụga ụlọ arụsị. Ọtụtụ n'ime…
Ekpere Rosh Hashanah na aguru Torah
Igwe a bụ akwụkwọ ekpere pụrụiche nke ejiri Rosh Hashanah duzie ndị…
Akụkọ banyere ndị Juu banyere Ista
Na njedebe nke akwụkwọ nsọ nke Jenesis, Josef kpọọrọ ezinụlọ ya gaa Ijipt.…
Ndị Juu na-asa aka
N’ọdịnala ndị Juu, ịsa aka abụghị naanị ezigbo ịdị ọcha. Achọrọ…
Nzọụkwụ maka ịgba alụkwaghịm Alakụba
adlọ	Edere ya Septemba 28, 2019 Eprel 13, 2020
A nabatara alụkwaghịm na Islam ka ọ bụrụ ebe ikpeazụ ma ọ bụrụ na alụghị di ma ọ bụ nwunye na-aga n'ihu.…
Etu ị ga-esi na-ekpe ekpere ndị Alakụba kwa ụbọchị
Ugboro ise kwa ụbọchị, ndị Alakụba na-akpọrọ Chineke isiala. Ọ bụrụ n’ị na-amụ ikpe ekpere ma ọ bụ chọọ ịmata naanị ihe ndị Alakụba na-eme n'oge ekpere, soro ntuziaka ndị a. Maka ntuziaka ...
Gini ka Koran kwuru banyere ndi Kraist?
N’oge esemokwu ndị a dị n’etiti nnukwu okpukperechi nke ụwa, ọtụtụ Ndị Kraịst kwenyere…
Buddha na sexism
Mụ nwanyị Buddha, gụnyere ndị nọn, ndị mmegide tara ahụhụ nke ukwuu ...
Ndụ nke Buddha, Siddhartha Gautama
Ndụ Siddhartha Gautama, onye anyị na-akpọ Buddha, bụ ihe akụkọ na ...
Uzo ndi Buddha gha ibu nri tupu iri nri
Schoolslọ akwụkwọ Buddhism niile nwere ememe metụtara nri. Dịka ọmụmaatụ, omume ...
Ihe edepụtaraNdị mmụọ ozi
Gini bu kpakpando Krismas nke Bet-lehem?
Na Oziọma Matiu, Akwụkwọ Nsọ kọwara kpakpando dị omimi nke na-egosi ebe Jizọs Kraịst bịara n’ụwa na Betlehem na Christmas mbụ ma mee ka ndị amamihe (akpọrọ Magi) chọta Jizọs ka ha nwee ike…
Ndi mo ojo nke ndi mo-ozi dara ada?
Ndị mmụọ ozi dị ọcha na mmụọ dị nsọ, ndị hụrụ Chineke n'anya ma na-ejere ya ozi site n'inyere ...
Ihe puru iche nke ihe iriba ama nke ọnụnọ nke mmụọ ozi Raguel
A maara onye mmụọ ozi Raguel dị ka mmụọ ozi nke ikpe ziri ezi na nkwekọ. Ọ na - arụ ọrụ maka ...
Gịnị bụ Shiksa?
adlọ	Edere ya Septemba 27, 2019 Eprel 13, 2020
Enwetara na abụ, ihe nkiri TV, ebe ihe nkiri na ụzọ ọ bụla ọzọ si agbasa ọdịbendị na mbara ala,…
Ihe ọ pụtara ihu ihu Chineke n’ime Akwụkwọ Nsọ
adlọ	Edere ya Septemba 27, 2019
Nkebi ahịrịokwu "ihu nke Chineke", dịka e si jiri ya mee ihe na Bible, na-enye ozi dị mkpa gbasara Chineke Nna ...
Gịnị bụ onyinye mmụọ nsọ?
Onyinye nke Mo Nso bu uzo nke esemokwu na aghara di netiti ndi kwere ekwe. Ihe a bu okwu nwute, nihi na onyinye ndi a bu inye ekele nye Chineke maka iwu ulo uka. Ọbụna taa, dị ka ọ dị na chọọchị mbụ, iji na-ekwesịghị ekwesị ...
Alụmdi na nwunye dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
Alụmdi na nwunye bụ okwu dị mkpa na ndụ Ndị Kraịst. Ọtụtụ akwụkwọ, akwụkwọ na akụrụngwa nke…
Etu esi eme mmemme ọnwa ọhụrụ
Ọnwa ọhụụ bụ usoro ọmụmụ dị iche iche nke ọnwa. Ọzọkwa…
Ndụmọdụ 7 iji malite omume Reiki
Ọ bụghị onye ọ bụla na-eme Reiki chọrọ iji ọzụzụ ha dị ka ụzọ…
Nri nke riri kacha enye Chakras nri gi
Mgbe ị na-eche maka sistemụ chakra gị, ọ nwere ike ị naghị atụle ...
Ihe ise a gosipụtara n’ọkụ, mmiri, ikuku, ụwa, mmụọ
Ndị Greek kwuru na e nwere ihe ise dị mkpa ha nwere. N'ime ndị a, anọ bụ akụkụ anụ ahụ - ọkụ, ikuku, mmiri na ụwa - nke ụwa mejupụtara. Ndị na-ahụ maka ndị na-eme njem ahụ mesiri jikọtara akara atọ triangulu iji nọchitere ...
Jikọta akara zodiac na ihe ọcha
Ekesa akara iri na abụọ nke zodiac n'etiti ihe anọ dị na Renaissance, ya na atọ…
Isi ala uwa bu isi uwa nile
N'ọtụtụ okpukpe oge ochie, a na-ejikọta chi na ike nke okike. Ọtụtụ ọdịnala na-emekọrịta ihe ...
Etu esi ewelata ihe mgbu na Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Raphael
Mgbu na-afụ ụfụ - mgbe ụfọdụ ọ dịkwa mma, maka na ọ bụ ihe mgbawa ịgwa gị…
Olee ihe ndị mmụọ ozi mere?
Ndi mo-ozi yiri ihe nke a na-ahụ anya na ihe omimi ma e jiri ha tụnyere mmadụ na anụ arụ na ọbara.…
Ihe iriba ama na anumanu si n’aka anumanu na anwusi
Animalsmụ anụmanụ nọ na ndụ mgbe a nwụsịrị, dị ka anu ulo, na-eziga ihe ịrịba ama na ozi na ndị mmadụ n’eluigwe? Mgbe ụfọdụ, ha na-ekwu, mana nkwukọrịta anụmanụ mgbe ọ nwụrụ dị iche n’otú mkpụrụ obi mmadụ si ekwurịta okwu mgbe ha nwụrụ. Onwe…
Ole ndị bụ ndị amụma Alakụba?
adlọ	Edere ya Septemba 26, 2019 Eprel 13, 2020
Islam na-akuzi na Chineke zigara ndi-amuma na ndi mmadu, n’oge di iche na ebe di iche iche, ka ha na ndi ozo kparita uka ...
Ozi dị mkpa gbasara Ramadan, ọnwa nsọ nke Alakụba
Ndị Alakụba gburugburu ụwa na-atụ anya ọbịbịa nke ọnwa kachasị mma nke afọ. N'oge…
Eluigwe na Koran
Ememe Afọ Ọhụrụ nke Hindu site na mpaghara
Ememe Afọ Ọhụrụ na India nwere ike ịdị iche iche dabere na ebe ị nọ. Ndị…